Galaxy Z Flip၏ ကင်မရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာ အသစ်ကို ကြည့်ပါ။ | Samsung Myanmar
Galaxy Z Flip၏ ကင်မရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာ အသစ်ကို ကြည့်ပါ။
ဖက်ရှင်ကျကျ ခေါက်နိုင်တဲ့ စမာ့တ်ဖုန်း၊ Galaxy Z Flip က သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဆဲလ်ဖီ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ အချိန်ပိုင်းလေးတွေကို တွေးလို့ရနိုင်သမျှ ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ ဖမ်းယူပေးတဲ့ ကျယ်လွန်းမကကျယ်တဲ့ မှန်ဘီလူး တွေနဲ့ည hyperlapse တွေကြောင့် ဘယ်သူမှ မကျော်လွှားနိုင်တဲ့ ကင်မရာအတွေ့အကြုံတစ်ခု ပေးပါတယ်.
လက်နဲ့ ကိုင်ထားစရာမလိုပဲ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဗွီဒီယိုတွေရိုက်ကူးလိုက်ပါ.
ဒီ ခေါက်လို့ရတဲ့ကိရိယာဟာ သင်က ကာဗာစခရင်မ်ကို အသုံးပြုတဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ် ကိရိယာကို ခေါက်ထားတဲ့(လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရပ်တန့်နိုင်တဲ့) မုဒ်မှာခေါက်ထားတဲ့အချိန်မှာ လက်မကိုင်ပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက် အကောင်းဆုုံးဖြစ်တယ်။ စကားနဲ့ အမိန့်တစ်ခုပေးပြီးဖြစ်စေ စခရင်မ်ပေါ်မှာ သင့်လက်ဖဝါးကို ပြပြီးဖြစ်စေ Galaxy Z Flip နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ အလွယ်တကူရိုက်လိုက်ပါ။
မှတ်သားရန်- ခေါက်သည့်မုဒ်ကို အချို့သောထောင့် အတိုင်းအတာအတွင်း၌သာ ထောက်ပံ့ထားပါသည်။
ဓာတ်ပုံ ဗွီဒီယိုရိုက်သည့် မုဒ်များကို မည်သို့ ရွေးချယ်ပါသလဲ
အဆင့် ၁။ ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်ပြီး ကင်မရာ အက်ပ် သို့သွားပါ။
အဆင့် ၂။ ဘယ်ဖက် အပေါ်ထောင့်တွင် တည်ရှိသော ဆက်တင်များ အိုင်ကွန် ခေါက်လိုက်ပါ။
အဆင့် ၃။ ဓာတ်ပုံဗွီဒီယို ရိုက်သည့်နည်းလမ်းများ မီနူးကို ခေါက်လိုက်ပါ။
Voice control နှင့် Show palm တို့ကဲ့သို့သော ရိုက်ကူးပုံနည်းလမ်းများကို သင်ဖွင့်နိုင်ပါသည်.
အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ခလုတ်ကို ခေါက်ပါ၊ ထိုအခါတွင် ”ပြုံးပါ”၊ “ချီးစ်” သို့မဟုတ် ”ရိုက်” ကဲ့သို့သော အဓိကစကားလုံးများ ပြောပေးခြင်းဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ပါသည်။ “ဗွီဒီယိုရိုက်ပါ” ဟုပြောခြင်းဖြင့် ဗွီဒီယိုတစ်ခုလည်း မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။
လက်ဖဝါးပြခြင်းကို မှတ်မိစေရန် လက်ဖဝါးပြပါ (Show palm) ခလုတ်ကို ခေါက်ပါ။ စခရင်တွင် သင့်လက်ဖဝါးကို ပြခြင်းဖြင့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ သင်ရိုက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကာဗာစခရင်ကိုအသုံးပြုချိန်တွင် သင့်လက်ဖဝါးကို ပြခြင်းက တိုင်မာကို စတင်စေမည်ဖြစ်သည်၊ သို့မှသာ ဓာတ်ပုံကို ဘယ်အချိန်တွင်ရိုက်မည်ဆိုသည်ကို သင် အတိအကျ သိရှိပါလိမ့်မည်။
*ယခုုရုုပ္ပံုုက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ နမူနာျဖစ္ပါေသာ္လည္း သင္၏နိုုင္ငံသံုုး ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ရရွိနိုုင္ပါသည္။
Galaxy Z Flip's ကင်မရာသည် ညအချိန်တွင်ပင် ပါဝါအပြည့်ရှိပါသည်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရပ်ပြီး ခေါက်ထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကင်မရာထောက်တိုင်အနေဖြင့် တွဲလိုက်သောအခါ ညဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးမှုက သင့်အား ညရိုက်ပုံအသစ်အဆန်းတစ်ခုပေးအပ်ပါသည်ညရိုက်မုဒ်ကိုသုံးပြီး
တောက်ပကြည်လင်သည့် ဓာတ်ပုံတစ်ခုအဖြစ် ပူးပေါင်းသွားရန် ၅ စက္ကန့်လျှင် ၁၄ ချက်ရိုက်အထိ နိုင်ပါသည်။
ညရိုက်မုဒ်ကို ဖွင့်ရန် ကင်မရာ အက်ပ်ကို ဖွင့်ပြီး အပိုဆောင်း မီနူးကိုဖွင့်ကာ ညရိုက်မုဒ်ကို ခေါက်လိုက်ပါ။
လှုပ်ရှားအသက်ဝင်သည့် ည ဗွီဒီယိုများ ရိုက်ကူးရန် 'Night hyperlapse' လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးချပါ။
night hyperlapseမုဒ်ကိုဖွင့်ရန် ကင်မရာ အက်ပ်ကိုခေါက်ပါ၊ အပိုဆောင်း မီနူးကို ခေါက်ပြီး hyperlapse ကို ခေါက်ကာ လရိပ် ပုံ အိုင်ကွန်ကို ခေါက်ပါ။
မှတ်သားရန် - 'Night hyperlapse' မုဒ်ဖြင့် ရိုက်ကူးချိန်တွင် သင်၏ဖုုန်းကို ငြိမ်ငြိမ်ကိုင်ထားသင့်သည်။ ဖုန်းကို တည့်တည့်ထောင်ကိုင်ပြီး ခေါက်ကာ မာကျောသည့် မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်တွင်ထားရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
ဓာတ်ပုံ နှင့် ဗွီဒီယိုများကို စခရင်မျက်နှာပြင် အချိုးအဆ ကျယ်ကျယ်ဖြင့်ရိုက်ကူးပါ
ရရှိနိုင်သော စခရင်အချိုး မုဒ်အမျိုးအစားများ
၃း၄ - ဓာတ်ပုံ အတွက်သာ (ဓာတ်ပုံကို အသေ ဆက်တင်ချထားသည်)
10 း၁၆ - ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို (ဗွီဒီယို ကို အသေ ဆက်တင်ချထားသည်)
၁း၁ - ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို
၉း၂၂ - ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို
၁၆း၉ - ဗွီဒီယို အတွက်သာ
Galaxy Z Flip ကိရိယာကိုအသုံးပြုရာတွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပြုပါ
သင်၏ Galaxy Z Flip ကာဗာစခရင်ကို အသုံးပြုပုံ